Wararka - Ma jiraa wax farqi ah oo u dhexeeya POF iyo filimka kuleylka yareyn kara?
Ma jiraa wax farqi ah oo u dhexeeya POF iyo filimka kuleylka yareyn kara?
Ma jiraa wax farqi ah oo u dhexeeya POF iyo filimka kuleylka yareyn kara? POF macnaheedu waa filim kuleylka yareyn kara. Magaca buuxa ee POF waxaa loogu yeeraa lakabyo badan oo iskudhaf ah oo polyolefin kuleylka filimka yareyn kara. Waxay u isticmaashaa polyetylen-cufan hooseeya sida lakabka dhexe (LLDPE) iyo co-polypropylene (PP) oo ah lakabyada gudaha iyo dibedda. Waxaa lagu sameeyaa baco balaastik ah oo laga soo saaraa mashiinka, ka dibna la mariyo habab gaar ah sida dhimista sameynta iyo sicir bararka filimka. Magaceeda Ingiriisiga ah waa Polyole fin. Guud ahaan marka laga hadlayo, filimka kuleylka yareyn kara waa POF, ama Polyole fin Shrink Film.
1. Cunto barafaysan, waqtiga keydinta ayaa ka dheer.
2. Dabacsanaanta iyo kala bixin fidsan.
3. Iyada oo leh shaqo isku-dhejis ah.
4. Waxay leedahay dhalaal iyo hufnaan aad u sarreeya.
5. Heerkulka hoose, si dhakhso leh ayuu u gaabiyo.
6. Daabacaad heer sare leh xawaare sare. Sababtoo ah awoodeeda isku xirnaanta oo xoogan, filimka soo yaraada waxaa loo isticmaalaa hareeraha farsamada iyo mashiinka ku wareegsan
7. Amaan iyo sun lahayn: Qalabka loo adeegsado filimka kuleylka yareyn kara waa kuwa aan sumoobi lahayn waana qalabka kaliya ee baakadaha cagaaran laga caddeeyo Mareykanka.
8. Dabacsanaan wanaagsan: ka fogow saameynta ay leeyihiin xoogagga dibedda saameynta ay leeyihiin alaabooyinka la soo baakadeeyay, doorna ka cayaaraan ilaalinta waxyaabaha baakadeysan. Qiimaha baakaduhu wuu hooseeyaa, tayaduna way hooseysaa.
9. Heerka yaraanshaha oo sarreeya: Heerka yareynta ee filimka kuleylka yareyn kara wuxuu gaari karaa illaa 75%, oo ku habboon baakooyinka wadajirka ah ee waxyaabo badan, oo ku habboon gaadiidka. Oo la kulmi kara shuruudaha yaraanshaha ee badeecooyinka kala duwan.
10. Iska caabin adag oo qabow: Xitaa iyadoo lagu jiro xaalad laga jaray 50 darajo Celsius, sifooyinkeeda jir ahaaneed isma beddeli doono, sidaa darteed waxay ku habboon tahay baakadka iyo rarka cuntada qaboojiyaha ah.
Filimka yareyn kara kuleylka ee PVC wuxuu ku habboon yahay baahiyaha baakadaha ee alaabooyinka warshadaha kala duwan. Waxaa loo isticmaali karaa hal baako ama wax yar oo wax lagu uruuriyo, ama baakado waaweyn oo wax lagu duubo. Waxaa loo isticmaali karaa qalabka wax lagu qoro, qalabka caruurtu ku ciyaarto, dharka, waraaqaha, cabitaanada, daawada, Baakadaha kuleylka kuleylka ah ee loogu talagalay sagxadda-iyo-jeexjeexa, qalabka qalabka wax lagu jaro, iwm. filimka dunida dhabta ah.
Waxay leedahay daahfurnaan sare, yaraansho sare, adkeyn sare, waxqabadka daboolida kuleylka sare, antistatic, iska caabin qabow oo aad u fiican, xuub yaraanta jilicsan oo aamin ah. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa baakadaha dibedda iyo baakadaha wadajirka ah ee warshadaha kala duwan sida cuntada, is qurxinta, hadiyadaha, daawada, qalabka xafiisyada, qalabka carruurtu ku ciyaarto, alaabada maqalka iyo muuqaalka ah, elektaroonigga, qalabka balaastigga ah, baahiyaha maalinlaha ah, iwm .Waxay ku habboon tahay nus-otomaatig iyo mashiinada baakadaha si buuxda otomaatiga u ah.
Polyolefin Pof Shrink Film, Duubista Polyolefin Pof, Iskudhin Duubista Filimada, Yaree Filimka PCv, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista, Polyolefin Iskudhin Heerkulka,